Ngasiphi isandla senza umlindo wentombazana kwaye indoda igqoka?
Nguwuphi umlindo onxibayo?
Sisiphi isandla sokugqoka umlindi
Umlindo ngumncedisi wesitayela kunye nesimfuneko. Namhlanje ungakufumana lula malunga nexesha ngokujonga igajethi okanye ikhompyutha yakho. Nangona kunjalo, ukubaluleka kwewashi akunciphisi. Emva koko, bathetha ngaphandle kwamagama malunga nesitayela somnini wabo, bagxininise ukulungelelanisa kakuhle, bancedise ingubo, bancede bazivakalise. Abantu abaninzi bayazibuza ukuba bahlobo luni lugqoba ngesandla. Akukho mithetho eqinile yokugqoka iingubo. Ngokuqhelekileyo zifakwa kwisandla esingenaxakeke kakhulu. Umzekelo, umgcini wesobunxele ubeka umlindi esandleni sakhe sokunene, kunye nesandla sokunene ngakwesobunxele. Oku kudla ngokuphula umthetho. Emva koko, into ebaluleke kakhulu yintuthuzelo.
Indlela yokugqoka umlindi
Amawashi anamhlanje kufuneka athengwe kuphela. Ibhetri ikuvumela ukuba uyenzele iminyaka, usikhathalele malunga nokuhamba kwabaqhubi. Kodwa kwiintsuku zakudala, i-clockwork kwafuneka iqaliswe rhoqo. Intloko evumela ukuba le nto yenziweyo ikunene. Kwakulula ukulawula isandla sakhe sokunene. Yingakho i-accessory yayihlala ihlotshiswe ngesandla esokhohlo. Kuyathakazelisa ukuba iilindo zokuqala zabesifazane zazigqutywa ngabasetyhini, njengokuba ngoku njengamanje abafazi bayazihlobisa ngamacici kunye neentsimbi. Kubantu aba bantu abazange bafikelele kumntu, ngoko abazange banomdla kuhlobo luni lugqoko.
Ukuthandwa kwalethwa yiMfazwe Yehlabathi Yeyokuqala. Ngelo xesha, amadoda, ewe, abazange bafune ukuzihobisa. Bayafuna into eyenzayo eya kunceda ukuba bafumane ngokukhawuleza malunga nexesha. Ukubukela iipokhethi ezifanelekile. Emva koko u-Alberto Santos-Dumont wabuza umhlobo wakhe ukuba enze isixhobo esilungileyo esasetyenziswa emoyeni. Ngoko ihlabathi labonakala umzekelo wokubukela kwamadoda okuqala.
Namhlanje, ngokweendleko zomlindi womntu, umntu unokugweba imeko yakhe. Kukholelwa ukuba ummeli wesigqeba esomeleleyo sobuntu kufuneka ahlobise i-watch, enokubaluleka emithathu yemivuzo yakhe yenyanga.
I-Wrist Ubukele le mihla
Namhlanje iwashi ibuyela kwifashini. Ngokufika kweefowuni zefowuni, izixhobo sele zilibalekile. Kodwa namhlanje kuya kuphuthuma ngakumbi ukukhulula ekuxhomekeke kwikhompyutha, kubandakanywa ngoncedo lwe-accessory enhle. Imibuzo malunga nendlela yokugqoka kakuhle umlindo esandleni sakhe, iphinda ifanelekile.
Kukholelwa ukuba abantu boshishino bayakhenkesha iiyure kunye nesandla, esenza ngokuphindaphindiweyo imisebenzi yabo yomsebenzi. Ngenxa yokuba ngale ndlela bahlala beyazi ukuba yiyiphi ihora ngoku.
Ngokutsho kweemfundiso zesiTshayina, amantombazana akakwazi ukugqoka umlindi esandleni sabo sokunene, kuba kukho indawo yeCun, echaphazela iinkqubo zamandla emzimbeni. Xa ivinjiwe, impilo yabantu iyancipha. Kubantu, iphuzu lichasene ngqo. Ngoko ke, abancinci banconywa ukuba banxibe i-accessory kwicala lasekunene, kunye namakhosikazi ngakwesobunxele.
Abanye oogqirha beengqondo baneengcamango zabo ngendlela yokubeka kwi-accessory. Bakholelwa ukuba ngokubeka isigcobo ngakwesokunxele, loo mntu uhlala ejonga emva. Ngesandla sokunene, lufanekisela umnqweno wokujonga nokuqhubela phambili.
Umlindi wesandla - ukufumana okuza kuxelela abanye ngcamango yakho enhle. Xa ukhetha oko, zama ukukhetha izinto eziphathekayo, ngokugqithisa izixhobo ezincinci kunye nezinyithi ezingenanto. Kwaye xa uphendula umbuzo malunga nendlela yokugqoka umlindi, ziphulaphule. Emva kwakho konke, nguwe kuphela onokuyiphendula ngokubhetele kunomnye umntu.
Imiba yabantu abatshatileyo
Indoda esuka kwesikrini: ilungile okanye isohlwayo?
I-Stylistics kunye nesitayela sempahla yabantu
Umfana uthi andiyiqondi.
Iingcebiso ezifanelekileyo zonxibelelwano namadoda
Iintlobo zeenqunu zabaseTyhini
Ingqwalaselo yenkxalabo "Vula imfihlo iM Limoni"
Uxinzelelo lwegazi oluphantsi, uncedo
Umdaniso wokuqala wabasanda kutshata
Xa intombazana ihlazisa ngokwalamano?
Izinzuzo zamakhukhamba kunye netamatato ngobuhle kunye nempilo
ICream for Napoleon custard
Intamo ye-Swan - ukulungiswa okufakwayo okanye umphumo wokunyamekela?
Ikhadi lokubulisa lonyaka omtsha kunye nobuhla, ifoto
I-Custard nge calendula
Hlangana nenkukhu kunye nelayisi